Famonoana zaza :: Olona enina samy nogadraina • AoRaha
Famonoana zaza Olona enina samy nogadraina
Naiditra am-ponja vonjimaika avokoa ireo olona enina voarohirohy tamin’ny famonoana zazavavy, sivy taona, teny Ambohibao, herinandro lasa izay. Ahitana olona telo mianaka: mpivady sy ny zanany vavy amin’izy ireo, ary lehilahy telo hafa. Voatazona eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy ny telo lahy tamin’iretsy voampanga, raha eny Antanimora ireo vehivavy mpianaka sy lehilahy mpiasa an-trano.
“Ilay lehilahy mpiasa irery ihany no niaiky sy nitantara ny zava-nisy sady nilaza fa nokaramaina 5000 ariary. Nanda hatramin’ny farany kosa ny olona dimy, saingy ny Fitsarana no tompon’ny fanapahan-kevitra. Heverina ho lonilonim-piaraha-monina no antony namonoana an’ilay zazavavy”, hoy ny fanampim-panazavan’ny zandary eny Ambohibao izay nisahana ny famotorana an’ity raharaha ity.
Efa nifampitadiavan’ny ray aman-dreniny io ankizivavy io. Hita faty tao anaty tatatra izy ny ampitso (Naotin’ny Fanoratana: sabotsy 25 desambra 2021). Mpiara-monina aminy avokoa ireo voarohirohy ho naka sy namono azy.
Fahitana razana tany Ambositra :: Vehivavy tadiavina mafy tamin’ ny fanolanana sy fahafatesan-jaza